TAARIIKH NOLALEEDKII MARXUUM CABDIQAADIR XAAJI MASALLE W/Q. Daahir F. Afdheere | Saadaal Media
TAARIIKH NOLALEEDKII MARXUUM CABDIQAADIR XAAJI MASALLE W/Q. Daahir F. Afdheere
Mahad oo dhan waxaa ay u sugnaatey Eebbaha awoodda leh ee ii suurta geliyey inaan idiin soo gudbiyo Taariikh nolaleedka Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle, hase yeeshee waxaan ugu horeyn halkaan uga mahad-celinayaa Walaalkeen Dr. Mahad Cumar Xaaji Masalle oo uu Marxuumku adeer u ahaa, kaasoo ii soo gudbiyey xogta ku saabsan Taariikhdii Marxuumka.
Eebbe naxariistii Janno haka waraabiyee Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle, wuxuu sanadkii 1940 kii ku dhashay gobalka Hiiraan, magaala madaxdiisa Baled-weyne, wuxuuna Waxbarashadiisa diiniga ah ama Dugsi Quraanka ku qaatey isla magaalada Baled-wayne, illaa uu ka dhameeyey.
Sanadkii 1949 ayuu isla magaalada Belad-weyne ka bilaabay Dusiga hoose ee Waxbarashada maadiga ah, taasoo markaas lagu baranayey luqadda Afka Talyaaniga, hase yeeshee dugsigiisa dhexe waxaa uu ka bilaabey magaalada Gaalkacyo, taasoo uu maamule ka ahaa Allaha u naxariistee walaalkii Gacma-dheere, isla markaana Macalin wax ka dhiga ka ahaa, Eebbe naxariistii Janno ha siiyee walaalkiis Gen. Cumar Xaaji Masalle. Wuxuu sanadkii 1957 dii bilaabey Dugsiga Allaahida, kaasoo isagana uu dhameystey dhammaadkii sanadkii 1959kii.
Sanadku markuu 1954 ayuu Marxuumku ku biirey dhalinyaradii Leegada ee S.Y.L uga mid noqdey magaalada Baledweyne, kuwaasoo markaas u badnaa ardadii ay iskuulka wada dhiganayeen.
Wuxuu sanadkii 1960 bilowgiisa noqdey ardadii iskuulada ka baxdey ee ku biiray Ciidamada Xoogga Dalka, kaasoo bishii Nofeembar sanadkii 1960 bilaabey tababar laba sano ah oo uu sanadkii 1962 ku qaatey Xiddigtii ugu horeysey, isla sanakaas ayaana waxaa loo beddaley gobalka Waqooyi Galbeed, magaaladiisa Hargeysa, markaasoo ciidamada la isku dhafayey.
Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle wuxuu kamid ahaa saraakiishii ugu horeysey ee qaab ardeynimo ah loogu qaado Tababarro dibadda ah, sida dalalka Masar, Ruushka, waxaana sanadkii 1963 isagoo ku sugan magaalada Baledweyne uu qaatey darajada Laba Xiddigle, kaasoo dagaalka uga qayb galey deegaanka Feerfeer.
Sanadku markuu ahaa 1964 ayuu mar kale waxaa uu Tababar u tegay dalka Ruushka, halkaas oo ku soo qaatey tababar dhinaca Istiraatijiyada dagaalka ah, waxaana sanadkii 1965 uu galay Jaamacadda Sharciga ee magaalada Muqdisho, kaasoo isagoo aan dhameysan la bedalay, waxaana sanadkii 1967dii uu mar kale helay dallacaadda darajadda ah Saddex Xiddigle ama Dhamme, kaasoo noqdey Taliyaha Ciidamada ee dhinaca xudduudaha ee Hiiraan.
Bishii Abriil sanadkii 1968 dii ayaa mar kale waxaa loo soo beddaley magaalada Muqdisho, kaasoo noqdey Taliyaha Ciidamada ee Xeradii la oran jirey Raag ee hadda loo yaqaan Furdada Cusub, hase yeeshee sanadkii 1969 ayuu kamid noqdey saraakiishii Xoogga dalka ee la wareegay Majaraha dalka, kuwaasoo uu hurmuud u ahaa Allaha u naxariistee. Gen. Maxamed Siyaad Barre, waxaanna sanadkii 1970 loo dallacsiiyey darajada Gaashaanle, kaasoo ka mid noqdey Golihii sare ee Kacaanka, isla markaana noqdey Guddigii loo xilsaartey dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo aad loogu xasuusto in ay dib u bixiyeen deyn aad badan oo dalka lagu lahaa.
Sanadkii 1972 ayuu Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle waxaa uu ka mid noqdey Guddiga loo Xilsaartey arimaha bulshada, kuwaasoo aad oga baaraan-degayey arima ay kamid yihiin, Waxbarashada, Caafimaadka, Daryeelka Ogoonta Iwm.
Sanadku markuu ahaa 1973 ayaa Marxuum Cabdiqaadir waxaa uu qaatey Darajada ah Gaashaanle Dhexe, markaas oo loo magacaabey Xoghayaha Madaxtooyada ee Golaha Sare ee Kacaanka, waxaana ay shaqadiisu ahayd sameynta barnaamijyada Golaha Sare ee Kacaanka, sida soo bandhigidda Siyaasadda Dawlada, Isku filaashaha dhaqaalee ee la gaarey, iyo arimmo badan oo ay kamid yihiin, Hurumarka, Caddaaladda, Waxbarashada, Caafimaadka, ka qayb gelinta shacabka dibu-dhiska dalka, iyo ilaalinta Hantida Umadda iwm.
Waxaa Marxuumka aad loogu xasuustaa inuu kamid ahaa Guddigii kaalin Libaax ka qaatey Abaartii Daba-dheer ee 1974 tii iyo Ololihii Horumarinta Reer Miyaga, waxaanna sidoo kale uu Guddoomiye u noqdey Guddigii Olalaha Carabiyeynta.
Sanadku markii uu ahaa 1976 ayuu Marxuumku qaatey Darajada Gaashaanle Sare, markaas oo uu kamid noqdey Golihii Dhexe ee X.H.K.S, isla markaana noqdey Guddoomiyaha Hoggaanka Abaabulka iyo Kicinta ee X.H.K.S.
Sanadku markuu ahaa 1986 dii ayaa Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle waxaa loo magacaabey Kaaliyaha X.H.K.S, kaasoo muddadii xilkaas hayey aad u dardargeliyey Hurumarka dalka, waxaana uu aad isagu hawley sixitaanka iyo la’ xisaabtanka wasaaradaha dalka, kuwaasoo laga xusi karo abuuritaankii Barnaamijka Itus iyo itaabsii, ku qoritaankii waxa khaldama ee wargeysyada Xidigta Oktaabar iyo Ogaal.
Sanadkii 1989 kii ayaa Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle waxaa loo magacaabey Wasiirka arimaha Gudaha, kaasoo aad looga maarmi waayey Hawl-karnimada iyo Khibradda soo taxnayd ee uu u lahaa Nidaamka Dawliga ah, waxaana waqtigaa Marxuumka aad loogu xasuustaa mucaawino gaarsiinta abaaro ku duftey Gobalada dalka qaarkood iyo waan waan ka dhalinta qaar kamid ah beelaha soomaaliyeed oo dirir u dhexeysey.
Ugu dambayn Dr. Mahad Cumar Xaaji Masalle oo uu Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masalle u yahay adeer laxmi ah, isla markaana ku hadlaya magaca dhammaan qoyska reer Xaaji Masalle, kaasoo isoo gaarsiiyey xogta soo taxnayd ee aan ka qorey taariikhdii Marxuumka ayaa waxaa uu halkaan oga mahad-celinayaa Madaxweynaha Dawladda Fedaraalka ah Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’usul-wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirshiid Cali, Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Cismaan Jawaari, Xildhabaanada Baarlamaanka, Wasiirada Dawladda iyo Dhammaan Jaaliyadaha qurba-joogta ah, gaar ahaan dalka Ingiriiska iyo dhammaan Ehaladii iyo asxaabtii muragada la qayb-sadey oo ka tacsiyeeyey ama kaalin ka geystey Geerida Marxuum Cabdiqaadir Xaaji Masale.